Dawaco barafaysan ayaa laga helaa Jarmalka mowjadaha qabow awgood. Saadaasha Shabakadda
Qabowga qabow asal ahaan ka soo jeeda Siberia ee ku dhufatay inta badan Yurub waxay ka tagtay aagag badan oo heegan ugu jira baraf, qabow daran, roob iyo dabeylo xoog leh Laakiin sidoo kale waxay ka tagtay sawirro muhiim ah oo waxyeello u leh duurjoogta.
Mid ka mid ah sawirrada sida weyn loogu faafinayo internetka ayaa ah tii dawacadii barafoobay ee laga helay webiga Danube.
Dawacada waxaa ka helay deris la ah Fridingen an der Donau (Baden-Württemberg, Jarmalka) aag ay ku dhowdahay baraf dhagax leh qiyaastii 60 sintimitir qaro weyn. Waxaa lagu qiyaasaa in dawacadu ay ceyrsaneyso xoogaa ugaarsi ah oo markii ay dhex marto barafka webiga dushiisa, ay jabtay oo ay ku dhacday biyo qabow ku dhowaad.
Qabowgii darnaa awgood, ayaa xayawaanku barafoobay. In kasta oo taariikhda geeridu aan si fiican loo aqoon, haddana waxaa loo arkaa mid dhowaan dhacday. Franz stehle, Ninkii helay dawacadan, wuu xirxirey wuuna tegey si uu u soo qaado meydka xayawaanka la qaboojiyey. Si looga baxo, wuxuu ku qasbay inuu isticmaalo miinshaar koronto lagu rido. Dawacadu waxay dul saarneyd barafka hufan ee la arki karo shaashaddaada oo dhan.
Jagada ay dawacadu ku dhimatay waxay la mid tahay jagooyinka ay xayawaanku ku leeyihiin matxafyada. Intaas waxaa sii dheer, faallooyinka dadka ee shabakadaha bulshada waxay isbarbar dhigayaan qaar ka mid ah sawirrada xayawaanka la qaboojiyey ee laga keenay filimada xiisaha leh Da'da Barafka. Franz Stehle wuxuu caan noqday ka dib markii lagu soo bandhigay sawiro iyo joornaalada dawacada la qaboojiyay.
Laakiin dawacadaani ma aha tan kaliya ee qabowgu qaboojiyey. Sawirro laga soo qaaday laba elk oo qabow ayaa la sii daayay bishii hore ee November meel u dhow magaalada Alaska ee Unalakleet. Xaaladdan oo kale, xayawaanku way dhinteen heerkulka hooseeya awgeed lala xiriiriyay geesahooda markay dagaallamayeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Hirar qabow » Dawaco barafaysan ayaa laga helaa Jarmalka mowjadaha qabow awgood
Dayax gacmeedka NASA ee loo yaqaan 'GOES-16' wuxuu dirayaa sawirradii ugu horreeyay ee xallinta sare leh ee Dunida